HALATRA LAVANILA TAO VOHEMAR : Jiolahy miisa enina matin’ny fitsaram-bahoaka
Tofoka tanteraka amin’ny asan-dahalo mahery vaika ny mponina amin’izao fotoana, hany ka raha vao sendra mahatratra ireo malaso manao ny asa ratsiny dia efa tonga ao an-tsaina ny fitsaram-bahoaka. 20 août 2019
Efa betsaka ny natao haza lambo sy nindaosin’ny fahafatesana tamin’izany ary mbola nahazoana loharanom-baovao mafana indray aza ankehitriny ny zava-niseho tao Beranofary, kaominina Tsarabaria, Distrika Vohémar. Araka ny loharanom-baovao voaray avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, omaly teo am-panoratana lahatsoratra dia ny alin’ny 18 Aogositra 2019 tamin’ny 1ora sy 10 minitra dia nahare antso ny kaomandin-tobim-paritra ao Ampanefena fa misy olon-dratsy miisa valo eo nanafika tokantrano iray tao Beranofary, kaominina Tsarabaria, Distrikan’i Vohemar.
Voaroba tamin’io fotoana io ny lavanila milanja 150 kg eo ho eo. Nanao ny fanenjehana ireo jiolahy avy hatrany ny fokonolona ka efa nanao fahirano sy fiambenana ny tanàna ihany koa. Ny kaomandin-tobim-paritra tao Ampanefena moa raha nahare ny raharaha dia nandefa zandary rahateo koa, lalana eo amin’ny adiny 4 ora an-tongotra ny elanelana misy avy ao Ampanefena ka hatreo Beranofary. Ny fokonolona izay efa niambina ireo olon-dratsy ireo no namono avy hatrany ny 6 tamin’ ireo jiolahy tonga nanafika, naratra mafy ary dia maty tsy tra-drano teo noho eo ireto farany. Tratra tamin’izy ireo ny basy poleta roa sy lavanila milanja 90kg eo ho eo.
Manoloana ity tranga ity dia nandray fepetra ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana ao amin’ny Faritra Sava ny amin’ny fanentanana ny olona mba tsy hanao fitsaram-bahoaka fa hanolotra ny olon-dratsy eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ary hametraka fitokisana ihany koa amin’ny mpitandro filaminana. Mbola hita taratra mantsy hatreto fa liana amin’ny fanatanterahana fitsaram-bahoaka ny ankamaroan’ny mponina raha sendra ka mahatratra olon-dratsy. Ao anatin’ny fikarohana lalina mahakasika ity raharaha ity moa ny zandary hatramin’izao no sady mbola karohina ny jiolahy roa tafatsoaka.